အိန္ဒြာကျော်ဇင် ကွယ်လွန်ပြီဆိုတဲ့ သတင်း အမှားကို ပြန်လည်ဖြေရှင်းလာတဲ့ ဒါရိုက်တာ မောင်မျိုးမင်း…. – Cele Oscar
အိန္ဒြာကျော်ဇင် ကွယ်လွန်ပြီဆိုတဲ့ သတင်း အမှားကို ပြန်လည်ဖြေရှင်းလာတဲ့ ဒါရိုက်တာ မောင်မျိုးမင်း….
ပရိသတျတှေ အခဈြတျော အိန်ဒွာကြျောဇငျ ကတော့ ရုတျတရကျ ပွောငျးလဲ သှားတဲ့ နိုငျငံရေး အခွအေနတှေမှော ပွညျသူတှနေဲ့ အတူ ရပျတညျခဲ့ တာကို လေးစားစှာတှရေ့ပါတယျ ။ ဒါ့ကွောငျ့လညျး ၅၀၅ (က) နဲ့ အမှုဖှငျ့အရေးယူ ခံရပွီး ဖမျးဆီး ထိနျးသိမျးခံ ထားရတာလညျးဖွဈပါတယျ ။
အခြိနျကွာစှာ ဒီနအေ့ထိ ဖမျးဆီး ခံထားရတဲ့ သူမ နဲ့ ပတျသကျပွီး ပရိသတျတှအေားလုံး ကလညျး စိတျမကောငျးဖွဈနကွေသလို တဈရကျမှမမဘေဲ့ ခုခြိနျအထိ ခဈြခငျနကွေဆဲပါ ။ အူဝဲအမွနျလှတျမွောကျလာမယျ့ သတငျးကောငျးကိုလညျး အခြိနျတိုငျး စောငျ့မြှျောနကွေတာပါ ။
ဒီနမှေ့ာတော့အူဝဲနဲ့ ပတျသကျပွီး ကောလာဟလ သတငျးတှေ လူမှုကှနျရကျ စာမကျြနှာထကျမှာ ပြံ့နှံ့ခဲ့ပါတယျ ။ အူဝဲနမေကောငျးဖွဈကာ ထောငျထဲမှာ ကှနျလှနျသှားပွီဆိုတဲ့ သတငျး အမှားတှပေဲဖွဈပါတယျ ။ ဒီသတငျးနဲ့ ပတျသကျပွီး ဒါရိုကျတာ မောငျမြိုးမငျးက သူရဲ့ အကောငျ့ကနေ ” အူဝဲ ဘာမှမဖွဈပါဘူး။ မဟုတျတာ တှမေပွောပါနဲ့ ” ဆိုပွီး ပွနျလညျ ဖွရှေငျးခဲ့ပါတယျ ။ ပရိသတျကွီး အနနေဲ့ အူဝဲ ရဲ့ သတငျးအမှားတှကေို မယုံကွညျဖို့ တိုကျတှနျးလိုကျပါရစေ..
ပရိသတ်တွေ အချစ်တော် အိန္ဒြာကျော်ဇင် ကတော့ ရုတ်တရက် ပြောင်းလဲ သွားတဲ့ နိုင်ငံရေး အခြေအနေတွေမှာ ပြည်သူတွေနဲ့ အတူ ရပ်တည်ခဲ့ တာကို လေးစားစွာတွေ့ရပါတယ် ။ ဒါ့ကြောင့်လည်း ၅၀၅ (က) နဲ့ အမှုဖွင့်အရေးယူ ခံရပြီး ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းခံ ထားရတာလည်းဖြစ်ပါတယ် ။
အချိန်ကြာစွာ ဒီနေ့အထိ ဖမ်းဆီး ခံထားရတဲ့ သူမ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပရိသတ်တွေအားလုံး ကလည်း စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြသလို တစ်ရက်မှမမေ့ဘဲ ခုချိန်အထိ ချစ်ခင်နေကြဆဲပါ ။ အူဝဲအမြန်လွတ်မြောက်လာမယ့် သတင်းကောင်းကိုလည်း အချိန်တိုင်း စောင့်မျှော်နေကြတာပါ ။
ဒီနေ့မှာတော့အူဝဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကောလာဟလ သတင်းတွေ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာထက်မှာ ပျံ့နှံ့ခဲ့ပါတယ် ။ အူဝဲနေမကောင်းဖြစ်ကာ ထောင်ထဲမှာ ကွန်လွန်သွားပြီဆိုတဲ့ သတင်း အမှားတွေပဲဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီသတင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒါရိုက်တာ မောင်မျိုးမင်းက သူရဲ့ အကောင့်ကနေ ” အူဝဲ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ မဟုတ်တာ တွေမပြောပါနဲ့ ” ဆိုပြီး ပြန်လည် ဖြေရှင်းခဲ့ပါတယ် ။ ပရိသတ်ကြီး အနေနဲ့ အူဝဲ ရဲ့ သတင်းအမှားတွေကို မယုံကြည်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ..